गफ ! .....: November 2008
म सँग तिम्रो सम्झनाको यही नै एउटा 'चिनु' थियो ।
नासो सम्झेर त्यहीपनि तिमीलाई फिर्ता दिनु थियो ।
एकोहोरो मेरो यो मोह तिमीमाथीको यस्तो लाग्दछ ,
धस्नु छुरी आफुमा हैन आफैं छुरीमा धसिनु थियो ।
यतिञ्जेल ठानेँ तिम्रै भक्ति प्राप्ति हो मेरो जिन्दगीको ,
सोचिरा'छु आज के त्यो मृगतृष्णामा बरालिनु थियो ।
सुन्दै सुनिँन कसैको मैले धोका होला तँलाई भन्थे ,
तिम्रो त साथैमा मुटु ताछ्ने बसिला अनि 'छिनु' थियो ।
राम्रै भएछ भन्ठानुँला भैदियो बेलैमा मोहभङ्ग ,
नत्र माटोमा गाडिएको फलाम जस्तै खिईनु थियो ।
गजल लेख्ने मूड आफैं नआई लेख्दिँन भनेको 'गजललाई त मेरो मूडको खाँचै नपर्ने रहेछ , आफैंले गजल कोर्ने मूड नबनाए सम्म' भनेर पनि बुझियो । हिँजो मबिजीले गजल सुस्तायो नि भनुञ्जेल सम्म अझै केहिदिन लेख्दिँन भन्दैथिएँ र आफुलाई अन्यत्रै ब्यस्त बनाउँदै थिएँ तर राती सुत्दा 'गजल सुस्तायो नि' भन्ने कुराले हिर्काईरहयो गिदीमा र निन्द्रा पर्नै दिएन त्यसैले हिँजै राती खेस्रा कोरेर अहिले अलि ताछतुछ गरेर ल्याएको छु ( उता गजल ग्रुपमा पनि लगेको छु । ) यौटा गजल - अभ्यासको कमि भएर हो वा लेख्न जान्न छाडेको हो , गाह्रो लाग्यो यस्लाई पुरा गर्न । मबिजीलाई हार्दिक धन्यवाद !
Posted by दीपक जडित at 4:58 PM9comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 4:55 PM9comments: Links to this post
आयु भन या जुनि अब चैं नश्वर देह यो खस्कँदो छ
आँखिर समयकै त हो खेल स्वप्न अझ यो पस्कँदो छ ।
लाग्छ आफैंलाई यो ईहलीला भएको छ अब बिसाउने बेला
छाडेर चेतना मुढो यो शरिर परब्रम्हमा मिसाउने बेला । । १
ज्यान रहुञ्जेल जवानी हुञ्जेल देखिएन कतै नि हरी
आज सर्वत्र देख्छु उनैलाई हो कि उनैको शरण परी ।
कपट , छल , जाल र *जुद्दे जे गर्नु लावण्य रहुञ्जेल हो
आँखिर खाली दुई हत्केला जोडी हुने त हरीसँगकै मेल हो ।। २
बन्द झनझन हुँदैछ दृष्टि जाँदैछन् सुकेर आँखाका पानी
गुन्छु मनमन हिँजो र आज लेखायो समयले के के कहानी ।
भोगियो डर र त्रासका माझ पोखिएझैं चुक अँध्यारो कालो
देखियो मेघमा बिजुली परेझैं छिनभरको झिलिक्क उज्यालो ।। ३
बलोस् भन्दछु उज्यालो अनन्त देखुन् लोकले हिंड्ने बाटो
गरुन् सबले प्राणझैं प्रेम नरोओस् एक्लिएर यो माटो ।
टेकेर माटो धानुञ्जेल ज्यान हुँदैन केहि माटो भन्दा माथी
देहले माटो छोडेर गए नि आँखिर यहि माटै हुन्छ साथी ।। ४
सपना फूलेको देख्ने छ रहर बस्ती बस्ती यि पाखाहरुमा
भय हटेर हर्ष नाचेको मेरा सन्ततीका आँखाहरुमा ।
निभ्नेछ तेल बिनाको दीप छिट्टै मेरो यो आँखाको कान्ति
कामना तर गर्दछु यौटै फैलियोस सर्वत्र सुख र शान्ती । । ५
* जुद्दे - युद्ध ( तस्विरका हजुरबाहरुले 'य' लाई 'ज' उच्चारण गर्नुहुने भएकोले )त्यसो त खुलाईरहनु नपर्ला मैले यो फोटो कहाँ भेटेर कविता लेखेँ भनेर तर सँधैं अलि ढिलो राख्थें भने यो पल्ट छिट्टै राखेँ ।
Posted by दीपक जडित at 5:08 PM7comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 1:49 AM 13 comments: Links to this post
छुट्टीएर रहरको सयपत्रीबाट
बिचल्नी परेर कतै
तिम्रो कविताका अक्षरहरुमा
खक्रक्क सुकेर टाँसीएको पाउँछु आफुलाई
यौटा पत्र छुट्टिँदा सयपत्रीबाट
सँगै बीज पनि आएको हुँदा
उमारेँ कि बेमौसमी सयपत्री
कोथा लागेँ कि शिशिरमा
हो हाँस्नलाई कविताका अक्षरहरुमा
लौ भन अब तिमी नै
के यो खुशीको कुरा हैन र ?
Posted by दीपक जडित at 5:37 PM4comments: Links to this post
पछुतो थोर बहुत् बाँकी छ तिम्रो नायक हुन नसक्दा ।
प्रेमको के कुरा भो र नजरमै लायक हुन नसक्दा ।
नलेखेको हैन सयौं गीतमा तिमीलाई रचेर मैले ,
पाएनन् अर्थ मेरा शब्दहरुले गायक हुन नसक्दा ।
दुरी भुगोलको हिसाब नगरी भ्रम सँधै बाँचिएछ ,
सकेन मौलाउन हाम्रो प्रेमले पायक हुन नसक्दा ।
न हात नै मिल्यो समाउन खोज्दा साथ पनि टाढा टाढा ,
भयो कि यो सब एक अर्काको सहायक हुन नसक्दा ।
आफ्नो निमित्त त के कुरा भो र आज तिम्रै निमित्त पनि ,
सकिनछु आवाज उठाउन विधायक हुन नसक्दा ।
जलाएर मात्रै कहाँ हुँदोरहेछ र 'दीपक' मनमा ,
छरेर उज्यालो त्यो 'दीपक' सुखदायक हुन नसक्दा ।
मिती याद गरेको छैन मैले तर निक्कै भयो मैले गजल लेखेको छैन । पछिल्लो पटक मैले ' नियम बनाउँ भन्छन ' भन्ने गजल लेखेको थिएँ । आज पुराना ड्राफ्टहरु हेर्दै जाँदा ( ब्लगका ) मैले निक्कै अगाडी लेखेको गजल भेटेँ जुन चार शेर पहिले नै तयारी अवस्थामा थियो भने दुई थप शेरहरु आज पुरा गरेर तपाईँहरु समक्ष ल्याएको छु । म गजल नलेखि रहेको अवस्थामै हुँदा यो गजललाई पुरा गरेको हुँ तर आज यस्तो महसुस भै रहेछ कि म आजैबाट गजल नलेखिरहेको अवस्थालाई तोड्दैछु । वास्तवमै मैले केहि समयलाई गजलबाट टाढै रहने विचार गरेको थिएँ तर आज एक्कासी पुरानो गजललाई पुरा गर्ने निहुँ बनाएर लेखीछाडें । हेरौ अगाडी म गजलमा फर्कन पनि सक्छु ।
Posted by दीपक जडित at 3:17 AM4comments: Links to this post
ठुलै डाँको छाड्यो रे
खोजी खोजी नक्सामा कर्णाली हेर्दाछन् रे
ए हजुर !
हाम्ले कैले देखम्ला
नेपाल देश नक्सामा कस्तो देखिँदो हो ?
अझ भाउन्न छुटुञ्जेल देखेको
नक्सामा कस्तो देखिँदो हो ?
कठै ! भेँडी गोठ गा'कि मेरी छोरीले
कर्णालीको नक्सा देखाउँदि हो त
हो हजुर यो जुनी हामी
पसिनानै डङ्डङ्ती गन्हाएपनि
गुनासो गर्ने थिनम
चिया पसलमा आजकल
कर्णालीकै बात मार्दाछन् रे
ए ! हजुर
चिया पसलको बातले
बग्ने कर्णालीलाई छेक्न कहाँ सक्लाउ र
अफसोस् यति हो कि
कर्णालीले हाम्रो तिर्खा धरी मेट्न सकेन
कर्म बादुरको लास हिँजो
छोरीचेलीले उठाउनु पर्यो
आँसु खसाएर कर्णालीले
'के तपाईँसँग कर्णालीको नक्सा छ ?' भनि सोध्दा
नढाँटी भन्नुस् त हजुर
क कस्ले छातीभित्र
कर्णालीको नक्सा खोज्नुभयो ?
Posted by दीपक जडित at 3:02 AM 1 comment: Links to this post
केहि अघि मैले म हाँसेको कुरा भाग १भनेर गन्थन लेखेको थिएँ र आज त्यसैको भाग २ ल्याएको छु । पहिलेझैं यो पल्ट पनि यो गन्थन पढ्दा तपाईंको समय नष्ट गर्ने रहेछु भने क्षमा दिनुहोला भन्छु है ।
मलाई त याद छैन तर आमाले भन्नुहुन्थ्यो म सानो छँदा बारीमा रोपेको काँक्रा , फर्सी टुसाएर दुईपातको भएको देखें भने पुरुक्क उखेलेर घरमा ल्याएर आमालाई देखाउँदै ' आमा ई हेल्नु त हाम्लो फल्सी फलेछ । ' भन्थेँ रे । पछि यो कुरा सुन्दा मलाई अनौठो लाग्थ्यो । सायद मलाई सेतो , पहेँलो र हलुका हरियो मिसिएको टुसाले र त्यसमाथी टप्पक्क परेको दुईपातले लोभ्याउँथ्यो त्यो बेलामा र अन्जानमै बिगार गर्न पुग्थेँ म तर अलि ठुलो भएर म साँच्चै किसान भएको थिएँ । मलाई लसुन , प्याज , खुर्सानी ईत्यादी रोप्न र फलाउन ज्यादै जाँगर चल्थ्यो भलै त्यति राम्रो कृषि उत्पादक बनिनँ म र पनि अन्नबाली , नगदे बाली लगाउने देखि लिएर हाँस , कुखुरा पाल्ने , खरायो पाल्ने जस्ता कामहरु गर्नु मेरो बाध्यता र रहर दुबै थियो ।
छेउ छेउमा हाल् बिचमा गन्धैले मर्छ
एकदिन म किसान नै छँदा ( भन्नाले खेती किसानी गरेर घरमा बसेको बेला ) दशैंको बेलातिर पसाएर फूल खेल्दै गरेको धानलाई पतेरा ( धानमा लाग्ने किरा खासमा हामी पँधेरा भन्थ्यौं ) बाट जोगाउनको लागी एक प्रकारको धुलो औषधी ( विषादी ) यौटा थाङ्नोमा बाँधेर बिहानको शीत छँदै धानबारी भित्रसम्म पसेर सानो लौरोको ट्याक ट्याक कुट्दै छर्दैथिएँ । त्यसैबेला छिमेकमा एकजना भेना ( भेना भन्थें म ) आईपुगे र सोधे , ' ओ ए दीपके के गडेको ? ' उनको बोली लट्याङ्ग्रो परेको थियो । मैले निक्कै याद गरेको थिएँ उनले बोल्दा यौटै अक्षरलाई पनि एक ठाउँमा एक तरिकाले र अर्को ठाउँमा अर्को तरिकाले उच्चारण गर्थे ।
' धानमा दबाई हालेको हौ भेना ।' जवाफ दिएं मैले ।
' ठुक्क ! मडा , टैले त ढान सबै बिगाडिस् नि , टेस्टो शीतमा पनि ढानबाडीमा पस्नुहुन्छ ? ' उनले मलाई गाली गरे ।
आफुभन्दा जेठापाका मान्छे , कुरा सुन्यो भने केहि त सिक्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई त्यसैले सोधेँ , ' हो र भेना ? कसरी हाल्ने त दबाई ?'
' भिट्र पस्नै पर्डैन नि , ठेउ ठेउमा हान् न , बिटमा कन्डैले मड्छ । ' उनले ' छेउ छेउमा हाल् न बिचमा गन्धैले मर्छ भनेका थिए । ' उनको अगाडी त म हाँस्न सकिँन जिस्क्याए जस्तो हुने तर यो कुरा सम्झँदा भने अझैपनि हाँसो लाग्छ ।
म कसैको फोटोकपि कि कोही मेरो फोटोकपि ?
मँशिरे चतुर्दशी अर्थात् बाला चतुर्दशीमा गाउँबाट सतबीउ पलबीउ छर्न सतासी धाम अथवा अर्जुनधारा जाने गर्थें र हामी केटाहरु पनि जान्थ्यौं रमाईलोको लागी । रातभरी धाममा किर्तन भजन , नाचगान गरेर बस्दा रमाइलो पनि हुन्थ्यो । सतासी धाम पछि पछि गएर निक्कै बद्नाम भएको थियो । जाँड रक्सीको ब्यापार , सेवन र मारकाटले । त्यसपछि सबै अर्जुनधारा जाने गर्थें । एकपल्ट ( साल याद भएन ) हामी चार पाँचजना केटाहरु गएका थियौं । मन्दिर परिसरमा , किर्तन गर्नलाई बनाई एको विषेश स्थलमा भएको भक्तजनको घुईँचो छिचोलेर आधारात तिर हामी बाहिर निस्कियौं , मन्दिर परिसरभन्दा बाहिर गएर चुरोट तान्न लागेका थियौं हामी ।
एकातिर मन्दिरहरु अनि स सानो पोखरी र पोखरीको अर्को छेउतिर सुपारीका रुखहरु रहेको छ त्याँहा हामी सुपारीको रुखतिर गयौं । त्याँहा ३ जना स्थानिय किशोरहरु झ्यास पराल भेला गरेर आगो बालेर बसेका थिए । चुरोट तानिसकेर तिनै फुच्चेहरुसँग एकछिन बस्ने विचारले हामी त्यतै लाग्यौं । मैले साथीहरुलाई ल यि फुच्चेहरुको दिमाग चाटुँ भनेको थिएँ पहिल्यै त्यसैले उनिहरुको छेउमा पुग्दा मैले यौटालाई , ' ओई बिर्खे ? तँ के गर्दैछस् हँ यहाँ ? सुत्नुपर्दैन घर गएर ? ' अलि हपारेझैं भनें ।
मैलिएर काति भएको सेति शर्ट र निलो पाइन्ट अनि हवाई चप्पल लगाएको उसले स्कूलको युनिफर्म लगाएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो थिएन । उमेरले नौ दश वर्षको लाग्ने त्यो फुच्चेले ङिच्च दाँत देखाउँदै अझ दुईहात पनि जोड्दै भन्यो , ' नमस्ते दीपक दाई , कैले आउनु भ'को ? '
म सँग हुने साथीहरु एकैचोटी डल्लो परिपरि हाँस्न थाले । मैले पनि थाम्नै सकिनँ हाँसो । कहाँको फुच्चेको दिमाग चाट्न गएको म , उल्टै नमस्ते दीपक दाई भनेर उसैले पो मेरो दिमाग चाट्न लागेको हो कि जस्तो । उसले मलाई चिन्दैन म चाँही उसलाई चिनेझैं गरेर , बरु नाम बिर्षेछु तेरो भनेर फुच्चेसँग रमाइलो गर्न मैले आफ्नो दिमागमा बनाएको प्लान एकैतालमा चौपट भयो । त्यसैले नयाँ सिर्जित परिस्थिती अनुशार उसलाई सोधें , ' कसरी चिनिस् तैंले मलाई ? मैले त विर्षिस होला पो भनेको । '
' चिनिहाल्छु नि तपाईंलाई , आज म तपाईँहेर्को घरमा मोई लिन ग'को थें , तपाईँको बुबाले दिनुभएन । '
तिनिहरुले बालेको झ्यासको धुनि ताप्दै केहिबेर कुरा गर्दा थाहा भयो । उसको गाउँमा दीपक भन्ने कोही केटा रहेछ ,काठ्माण्डौमा पढ्ने , उ हेर्दा म झैं देखिन्थ्यो क्यारे र अझ गजबको कुरा त त्यो फुच्चेको नाम पनि विर्ख नै रहेछ । पछि मैले म तेरो दीपक सञ्जेल ( उसले मेरो थर सञ्जेल भनेको थियो ।) होइन भन्दा पनि पत्याएको थिएन उसले ।
हाम्रो खाडीले पनि पश्चिमतिर पानी पार्छ ?
त्यसदिन म 'मन बाढी हो बाढी मन हैन' भन्ने कथा लेख्न बसेको थिएँ । असार बित्दो बेला भएपनि खडेरीले धर्तीमात्र हैन मान्छेकै आत्मा चर्काईसकेको थियो । पानी कैले पर्ला र खेतमा धानको गाभो टाँस्ने हो भनेर सारा गाउँ आकाश हेर्दो थियो । महङ्गो तेल किनेर पम्पसेटको पानीले धान रोपेको खेतपनि मानचित्रमा बिभिन्न राष्ट्र , अञ्चल , जिल्ला ईत्यादीको सिमाना कोरेझैं भएको थियो । दुख त मलाई पनि लाग्थ्यो पानी नपरेकोमा तर दुखि भएर केहि गर्न नसक्ने अवस्था थियो । त्यसैले म धेरै वर्षा भएर बाढीले पिरोलेको कथा लेख्न मस्त थिएँ । घरमा त्यसबेला आमा र म मात्रै थियौं । म आँगनमा भएको रबरको रुखको सिँयालमा मुढामा बसेर बेञ्चमा कपि राखेर लेख्दैथिएँ । आमा तरकारी केलाउँन मेरो छेउमा आउनुभयो र बेञ्चकै एकापट्टी बस्दै सोध्नुभयो , ' भाई यो मनसुन भनेको के हो ? '
लेख्दै गरेको कथाबाट ध्यान हटाएर एकछिन के भनेर सम्झाउने भन्ने सोचें र उल्टै सोधेँ , ' कहाँ सुन्नुभयो मनसुन भनेको ? '
' रेडियोमा सुनेको , बङ्लाको खाडीबाट मनसुन आउँदैछ रे अब पानी पर्छ रे । ' जवाफ दिनुभयो आमाले ।
' मनसुन भनेको यौटा पानी पर्ने प्रक्रिया हो । हाम्रो देशको पुर्वतिर बंगालको खाडी छ , त्यो मनसुन त्यहीँबाट उठेर आएर मात्र यता पानी पर्छ । ' ठ्याक्कै मनसुन भनेको के हो भन्ने सम्झाउन मलाई नै आएन र त्यसै टारेँ ।
आमा एकछिन चुपलाग्नुभयो । मेरो जवाफले चित्त बुझेन क्यार भनेर म आमाको अनुहारमै हेरिरहेको थिएँ ।
' त्यसो भए हाम्रो खाडीले पनि पच्छिमतिर पानी पार्दो हो नि ? ' आमाको जिज्ञासाले मरुञ्जेल हाँस उठ्यो मलाई । म सँगै आमापनि हाँस्न थाल्नुभयो ।
हाम्रो खाडी तिनचार जनाको खेतमा पर्नेगरी फैलेको चारपाँच बिगाहा जतिको पानीको दहलो थियो । हाँसो थामिएपछि मैले सम्झाएँ । बङ्गालको खाडी भनेको हाम्रो जस्तो खाडी हैन ठुलो समुन्द्र हो भनेर ।
र जल्दैछु शनै: शनै:
दियालोको तेल जस्तै
छोडेर केहि उज्यालो
मेरा ईच्छाहरुको पच्छ्यौरी
लहराएको छु धुँवासँगै
तरँग फैलाउँदै किरणहरुको
आफुलाई पल पल
यौटै उज्यालो सत्यको खातिर
सत्य - यहि उज्यालो
जहाँ मैले जलाएर आफुलाई
पवित्र निर्मल सोचको
सुन्दर सानो सँसार
जहाँ मैले रित्याएर आफुलाई
विलिन हुनेछु अँध्यारोमा
छोपिनेछ मेरो निँती
सानो सुन्दर संसार
जव म निभ्नेछु
दियालोमा तेल सकिएर
यहि उज्यालोमा अहिले नै
र छोड प्रेरणा उज्यालोको
प्रकाश छर्दै सुन्दर संसारमा
लाखौं लाख दीपकहरु ।
अघिल्लो साता माईसंसारमा फोटोमाथी कविता लेख्ने क्रममा लेखेको यो कविता बल्ल आज यहाँ राखेको छु ।
Posted by दीपक जडित at 4:57 PM No comments: Links to this post